Qalabka Caafimaad oo laga soo dejiyey Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde - Awdinle Online
Qalabka Caafimaad oo laga soo dejiyey Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde
Shixnad Qalabka Caafimaadka ee looga hortago COVID 19 oo uu ku soo deeqay Maalqabeenka u dhashay dalka Shiinaha, Jack Ma ayaa laga soo dejiyey Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho.
Hadal ka soo baxay Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu sheegay in ay Diyaarad nooceedu ahaa Q400 lagu soo raray 10,000 oo Kiilogaram ee Qalabka Daaweynte ee COVID 19, iyadoo Soomaaliya la soo gaarsiiyey 3,000 oo Kiilogaram, halka 7,000 ee Kiilogaram u gudbiyeen dalka Sudan.
Ma aha markii ugu horeysay ee uu Maalqabeenka Shiinaha, Jack Ma Qalabka Caafimaad ee Ka-hortaga COVID 19 soo gaarsiiyo dalka Soomaaliya iyo guud ahaan 46-ka Waddan ee Qaaradda Afrika.
Cuddurka COVID 19 waxa uu khatar ku hayaa guud ahaan dadyowga ku nool dalalka Caalamka, waxaana la diiwaan geliyey inuu Fayriska Koroona ku dhacay in ka badan afar milyan oo qof, iyadoo ay 287,613 qof u geeriyootay, halka ay 1,535,000 oo kale ka bogsadeen.
Dalkeenna Somalia waxaa la diiwaan geliyey inuu ku dhacay 1,089 qof, iyadoo ay 52 qof u geeriyootay, halka ay 121 ka soo bogsadeen.
Previous articleCiidamo ka soo goostay Jubbaland oo isu dhiibay Al-Shabaab
Next articleWaa noocee habka la doonayo in doorashadu u dhacdo?